Ukwenza Okuphelele Ngokwenza kwakho Imali | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 20, 2008 NgoLwesithathu, Januwari 4, 2017 Douglas Karr
Ukwenza imali ngebhulogi kunzima ngaphandle kokuthi unethrafikhi eningi noma uma une-niche enhle. Ngisebenzisa ubuchwepheshe bokukhangisa obuhlukile esizeni sami futhi ngihlatshwe umxhwele yimali engiyitholile. Enye yezingqinamba ngokusebenzisa isikhala sesikhangiso ukuthola okuningi ku-real estate. Ingabe usebenzisa izikhangiso zokubonisa? Izibhengezo? Izinkinobho? Izixhumanisi zombhalo?
Ngikholwa ukuthi lo ngumbono osemuva kwemizamo emisha efana I-Rubicon Project (okwenyuse imali yami ekukhangiseni kokukhokha ngakunye ekukhangiseni kwami ​​kubhulogi lami). Uhlelo lwabo luhlola ukusebenza kuzikhangiso futhi lulungisa ukukhangisa okuboniswe lapho ngokufanele.
Qaphela lapho nginqume khona 'ukudlala' futhi ngenze izincomo zami… akukuhle:
Isizukulwane Esilandelayo Sokwenza Imali
Okulandelayo kuwebhu kunezinhlelo zokusebenza ezizovumela bobabili umshicileli nomkhangisi ukulawula okugcwele, noma kunjalo. UmongoWeb, inkampani ehamba phambili yokukhangisa ngokwengqikithi imemezele izolo ukuthi bayayethula I-ADSDAQ Exchange Agency Trading Desk. Nayi i-blurb evela ku-Press Release yabo:
Ama-ejensi abhekene nezinkinga eziyinselele zokusebenzisa kahle imidiya nokufinyelela ekuqondeni okwenzekayo ngesikhathi sokuhlukaniswa kwezithameli. Bazosebenzisa i- I-ADSDAQ Exchange Agency Trading Desk ukuhlobanisa ukusebenza nokuqukethwe kukho konke ukusetshenziswa kwemali emkhankasweni wedijithali. Kusetshenziswa injini efanayo yesikhathi sangempela enika amandla ibhizinisi lezindaba lenkampani, i-ejensi yedijithali ingasebenzisa i-ADSDAQ Exchange Agency Trading Desk ekuthengeni kuma-portals, amanethiwekhi wezikhangiso kanye nokuthengwa okuqondene nesayithi ukwehlukanisa ukuthenga ngezigaba zokuqukethwe nokuhlobanisa ukusebenza komkhankaso nalezo zigaba . Le sevisi isebenza ngokwehlukana nebhizinisi lezindaba lenkampani.
Lapho nje umthengi noma umhlaziyi ethola lokhu kuhlaziywa, i-ejensi ingakwazi? Ngokucindezela inkinobho? Ithenge okuningi okusetshenziswayo okusebenzela umkhankaso othile futhi ithengise noma yiluphi uhlu lwempahla olungafezeki okulindelwe.
Nge-ADSDAQ (ayikasetshenziswa kubhulogi lami okwamanje), ngingabeka intengo ephansi yendawo yami yangempela KODWA ngikhonze ezinye izikhangiso uma kungekho muntu onquma ukuthenga. Yeka umqondo omuhle!
Ngamanye amagama, uma ngithi inkinobho ephezulu kwesokunxele ibiza u- $ 150, Umkhangisi ku-ADSDAQ angavikela isikhundla akhokhe nentengo. Kodwa-ke, uma kungekho olumayo, ngingaveza esinye isikhangiso lapho. Uhlakaniphe kakhulu. Manje unquma ukuthi impahla yakho ingakanani! Ngizongena kulokhu kujule futhi ngithemba ukuzama impela ezinyangeni ezizayo nge-ADSDAQ. Ingxenye enkulu kunazo zonke ukuthi angidingi ukulahla abantu engibasebenzisayo manje!
I-athikili ku-Yahoo! Ibhizinisi
Tags: ukwenza imali onlineukwenza imaliimali
UBarbara Ling (aka Owlbert)
Mar 20, 2008 ku-2: 04 PM
Siyabonga ngamakhanda phezulu - ngivakashele nje futhi ngabhalisela. Ngisaqhubeka ngicabanga ukuthi ngizoqedela kanjani yonke imali engiyitholayo esikhangiso kuwo wonke amasayithi ami… lokhu kungazuzisa kakhulu.
I-JT- Iphrojekthi yeRubicon
Mar 23, 2008 ku-4: 19 PM
UDouglas- ngiyabonga ngokuthunyelwe! Nginomthwalo wohlelo lomshicileli ku-Rubicon Project. Ngiyajabula ukuzwa ngolwazi lwakho oluhle ngohlelo lwethu. Ithimba lethu belisebenza kanzima kakhulu lisiza abashicileli abanjengawe benze imali eningi ngezikhangiso ezikusayithi lakho ngenkathi benza umsebenzi omncane.
Nakanjani sigcine sithunyelwe ngempendulo yakho.
Mar 23, 2008 ku-6: 32 PM
Siyabonga ngokuma, JT.
IRubicon ayidlalanga kahle nge-ADSDAQ ngakho-ke bekufanele ngidonse leyo ndlela. Izikhangiso zivele kodwa akukho okuchofoziwe okuvele kwabhaliswa ku-Rubicon. Ngeke sibe nakho lokho! Ngicabanga ukuthi bengingakwazi 'ukuyikhohlisa' ngokuhambisa lelo khasi nge-iframe, kepha lokho kuwukukhohlisa nje.
Ngishiye inothi ukuxhasa kulobubusuku. Enye i-kudos ekuhlinzekelweni kwamakhasimende akho - nina bantu niyamangalisa.
Mar 25, 2008 ku-12: 54 AM
Kuyindlela enhle yokubhala lokhu okuthunyelwe ukuze sabelane ngakho. Imikhiqizo muhle impela ukuthi ingaba yiqiniso futhi nginethemba lokuthi abantu abaningi bazoyibhalisela.
Kimi, ngizokwenza maduzane.